लेखापढी व्यवसायीको मनोमानी निर्मूल होओस् - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
लेखापढी व्यवसायीको मनोमानी निर्मूल होओस्
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०७:५४
सबै क्षेत्रमा सबै व्यबसायी असल पनि हुदैनन्, सबैजना खराब पनि हुदैनन्, तर सबै क्षेत्रमा कतिपय व्यवसायी यस्ता हुन्छन्, जसको गतिविधिले सो व्यवसाय नै प्रदुषित पनि बन्न सक्छ ।
यो कुनै एक क्षेत्रमा मात्र लागु हुने धरातलीय यथार्थ कुरा होइन । यसबारे जो कोही व्यवसायी जानकार छन् ।
लेखापढी व्यबसायी भन्ने वित्तिकै विशेषगरी सबैभन्दा ठूलो, संवेदनशील कार्यालय भनेर चिनिने जिल्ला अदालत, सबै कार्यालयलाई नियन्त्रण, नियमन गर्न सक्ने भन्ने गरिएको तालुक कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबैको दुख पर्दा सहारा दिने कार्यालय भनेर चिनिने प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय आसपास लेखापढी गरेर सेवा गर्ने व्यवसायीलाई बुझाउँछ । उनीहरुले ती कार्यालयमा कस्तो कामका लागि कस्तो व्यहोरा लेख्ने भनेर ‘मेसो’ पाएका हुन्छन् । उनीहरुसंग लेख्ने लाइसेन्स पनि हुन्छ, तर कतिपयले यही मेसो र लाइसेन्सको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीलाई ठगिरहेका हुन्छन् ।
कुन सामग्री लेखेको कति रुपियाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भनेर अधिकत्तम सेवाग्राहीलाई मेसो हुदैन । अरु व्यबसायीसंग दररेट बार्गेनिङ गरेर काम गर्ने चलन पनि प्राय हुदैन । यही अबस्थाको लाभ लिएर सेवाग्राहीको चेतनास्तर हेरी लेखापढीको दस्तुर असुल गर्ने गरिन्छ । अझ, कर्मचारीलाई यति र उति दिएमा काम हुन्छ भन्दै अतिरिक्त पैसा लिने पनि चलन छ । यस्ता गतिबिधि ‘ओपन सेक्रेट’ रुपमा चलिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित पक्षबाट पहल गर्नुपर्छ ।